Beesha caalamka War cusub ka soo saartay hanaanka doorashooyinka Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qoraal ay si wadajir ah u soo saareen wakiilada Beesha Caalamka ee Somalia ayaa looga dalbaday Hoggaamiyaasha Madasha Qaran inay qabtaan doorasho ku fadhida sharci, daah-furnaan iyo xisaabtan.
Qaramada Midoobey, Midowga Africa, Midowga Yurub, IGAD, Ethiopia, Italia, Sweden, UK iyo Mareykanka oo warkan soo saaray ayaa waxay sheegeen inay si dhow ula socdeen howsha Guddiga Madaxa banaan ee Xalinta Khilaafaadka, iyo toosh ku iftiiminta wararka la xariira in wax isdaba marin qatar ah ay dhacdey intii lagu guda jirey hanaanka doorashada, sida iyadoo la sameeyey musuqmaasuq, Cabsi galin, Afduub, iyo iyadoo lagu tagri-faley ergada la soo qorey laguna guul dareystey in loo hoggaansamo sidii loo baahnaa in loo raaco hanaanka qoondada kuraasta dumarka.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa codsanaysa in sharaxaad laga bixiyo sida 24 kursi oo markii hore la galiyey in dib u eegis lagu sameeyo ay Guddiga Xalinta Khilaafaadka ugu soo koobeen 11 kaliya.
Beesha Caalamka ayaa hoosta ka xariiqdey in Guddiga Xalinta Khilaafaadka ay mas’uul ka yihiin inay banaanka soo dhigto Xaqiiqda ku dahaaran iyo sida looga saarey kuraasta qaarkood, qaarkoodna looga diidey liiska dib ugu celinta doorashada.
Xubnaha Beesha caalamka waxaa kale oo ay xaqiijiyeen hoggaamiyaasha Madasha Qaran iyo Guddiga Xalinta Qilaafaadka in Aragtida, iyo qotada kala aragti duwaanshiyahooda aanan la daah-rogin ay noqonayaan kuwa Saldhig u noqda go’aanka gaarista natjiiada doorashada ee waxba kama jiraan lagu tilmaamey ee dib loogu noqonayo.